Taratasy taratasy 14 maimaim-poana ampiasaina amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | Photoshop, Textures
Raha fisaka loatra ny volavolanao ary mila avelanao hiaina izy ireo, tsy misy toa ny fahalalana mampiorina endrika tsara amin'ny làlana tsara.
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manome anao firaketana ny firafitry ny taratasy 14 amin'ny karazany rehetra: ara-dalàna, tsiranoka, antitra, voatsindry, fotsy, miloko ... Na firafitry ny taratasy fonosana. Ny zavatra rehetra dia mandeha mba hialana amin'ny monotony ny zavatra noforonintsika. Ny sary rehetra dia mahazo alalana amin'ny fampiasana maimaim-poana, na manokana na ara-barotra, ka tsy hanana olana amin'ny fampiasana azy ireo ara-dalàna. Andao handeha amin'ny fampisehoana!
1 Taratasy taratasy ho an'ny volavolanao
2 Firafitra 1
3 Teknolojia mena sy manga
Taratasy taratasy ho an'ny volavolanao
Raha mbola tsy nangataka teo aloha ianao lamba eo amin'ny volavolanao mety manontany tena ianao hoe ahoana ny fampiasana azy ireo. Voalohany indrindra, lazao aminao fa tsara indrindra ny mametraka firafitra avy amin'ny Adobe Photoshop. Noho izany, ny fomba mahazatra (raha mamorona sary miaraka amin'ny Illustrator ianao) dia ny famitana ny sarinao "base", miaraka amin'ny loko apetraka raha tianao, ary sokafy avy eo amin'ny Photoshop ary manomboka manampy antsipiriany.
Misy roa fomba handikana lamba amin'ny fisieo amin'izao fotoana izao ao amin'ny Photoshop:
File> Toerana> (Izahay dia mitady ilay sary resahina)> OK.
File> Misokatra. Raha vantany vao misokatra ny firafitra dia mankany amin'ny Edit> Copy. Mandeha amin'ny varavarankelin'ny volavolanay amin'ny Photoshop izahay ary tsindrio ny Edit> Mametaka.
Ny fahasamihafana: raha mampiasa ny safidy voalohany isika dia hiseho eo amin'ny sosona ny endrika toy ny zavatra marani-tsaina. Raha mampiasa ilay faharoa isika dia hiseho ho toy ny sosona mahazatra iray hafa ny firafitra. Zava-dehibe izany raha dinihina rehefa miasa, mba hisafidianana ny safidy ahazoantsika aina indrindra.
Raha vantany vao manana ny endriny isika, dia resaka filalaovana ny opacity sy ny mode layer. Azontsika atao koa ny mamafa ny faritra sasany izay tsy ilantsika azy.
Teknolojia mena sy manga
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Taratasy 14 hampiasaina amin'ny Photoshop